Weather in Bali in Desambra ~ Journey-Assist - Fety tany Bali amin'ny volana Desambra
Pejy fandraisana » Toetr'andro sy Bali » Bali » Indonezia » Asia » Eran-tany / Faritra » Weather in Bali tamin'ny volana Desambra
Weather in Bali tamin'ny volana Desambra
Ny volana Desambra, ny toetr'andro any Bali dia tsy ampoizina, avy ny orana amin'ny fotoana rehetra. Ny volana Desambra no tena tsy mahasorena indrindra nandritra ny volana maro eto: mpizahatany be, voaloto ny ranomasina, be ny fifamoivoizana be eny an-dàlana.
Mahatratra ny 33 ° eo afovoan-tanàna ny mari-pana amin'ny andro ary hatramin'ny 31 ° eo amin'ny morontsiraka. Nahatratra 25 ° ny mari-pana amin'ny alina.
Any avaratry ny nosy, mitovitovy ihany ny toe-piainana mitovy izay eo afovoany. Tsy afaka miafina amin'ny hafanana ianao eto
Fiantrana ny rivotra
Nahatratra 80 isan-jato ny fanetrentena. Misy ny entana. Mandrakotra rahona miavaka. Na dia miaraka aminy aza ianao, dia afaka mahazo taninkazo mahafinaritra any Bali ianao amin'ny volana Desambra. Tamin'ny andro farany tamin'ny volana desambra, dia mbola misy toetrandro tsara ka tsy misy hamandoana avo.
Ny orana amin'ny Desambra
Ny volana Desambra any Bali dia iray amin'ireo volana mendrika. Mahatratra 180mm ny habetsaky ny rotsakorana. Ny orana, na fohy na lava, dia afaka isan'andro. Ny antontan'isa dia nilaza fa tamin'ny volana Desambra tany Bali dia somary orana 22.
Ny hafanan'ny rano any Bali amin'ny volana Desambra
Tena mafana ny rano any an-dranomasina, ary 29 ° eo ho eo. Fa ny rivotra mitsoka avy any andrefana dia manondraka onja izay tsy mahasalama ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina.
Mora, raha tsy matanjaka dia rivotra avy any amin'ny ranomasina indraindray. Ny fanjonoana dia mety hampidi-doza.